Waa maxay nidaamka adeegga music Apple?
Apple waa mid ka mid ah shirkadaha ugu guulaha badan adduunka oo la og yahay ma ahan oo keliya ee wax soo saarka ay ka mid yihiin cajiib ah iPhone, iPad iPod, Mac iyo kuwa kale ee weliba wuxuu u adeega in ay bixisaa oo ay ku jiraan Apple Music . Music Apple waa Apple ee u gaarka ah portal geeyo music iyo adduunka oo dhan awood u isticmaala si ay u helaan xarumo music iyo radio cajiib ah. Waxaa jira siyaabo badan oo loo marayo taas oo ka dhigaysa Apple music aad heli karto oo soo socda waa qaar ka mid ah macluumaad dheeraad ah ee la mid ah.
1. Music qalabka-Qaar ka mid ah qalabka ay ka Apple kaas oo aad ku raaxaysan karaan music iyo sidoo kale qulquli t dhex music Apple ka mid ah iPhone, iPad iyo iPod taabto. Waxa kale oo ay u ciyaaro music on Mac iyo iyada oo loo marayo qalabka; waxa aad heli kartaa malaayiin songs, qaar ka mid ah idaacadaha cajiib ah oo dhowr ah qaababka kale ee music Apple. Maalmahan, iPhone iyo iPad ma aha oo keliya telefoonada iyo kiniiniyada lakiin ciyaartoyda sax ah music si gaar ah. Xataa waxaad music raaxaysan karaan ka Apple aad kombuutarka taas oo uu leeyahay Lugood soo bixi it on. By sidaas samaynaya, aad u hagaagsan kartaa qalabka PC iyo macruufka si music in si dhakhso ah oo si fudud u gudbin karaa.
2. Music Store-marka ay timaado dukaanka music ah, Apple waxay bixisaa Lugood in ay dhagaystayaasha caalamka. Lugood waa dukaanka app cajiib ah oo madal oo sidaas awgeed ay suurto gal ah si aad u soo iibsato, download iyo music il kasta oo ka mid ah qalabka macruufka iyo sidoo kale music ka mid qalab wareejiyo kale . Lugood waxaa sidoo kale looga baahan yahay in lagala Apple music app on qalabka iyo waxa muhiim ah in aad had iyo jeer version cusub waxaa ka mid ah. By xariirta Lugood, waxaad awoodi doontaa inay ku raaxaystaan ​​faa'iidooyinka badan oo dheeraad ah adeegga music Apple iyo madallo kale oo music.
3. Music hoorto-ilaa dhawr bilood ka hor, waxaad u lahaa in ay ku tiirsan si ay u Spotify iyo adeegyada kale ee Streaming music inay ku raaxaystaan ​​music ku saabsan qalabka macruufka laakiin tan iyo Apple ayaa bilaabay in ay madal u gaar ah, arrintan waa la xaliyay. Apple Music waa ku salaysan boosteejo ah oo geeyo music Times taas oo lacag la'aan ah marka hore xilliga tijaabada ee 90-ka maalmood ah ka dibna noqdo bixisay isticmaalka xiga. Madal Tani waxay ballan tayo fiican leh codka, inay helaan liiska mar walba sii kordheysa ee music, abuuridda playlist iyo qaybsiga iyo talooyin music curated xitaa aadanaha. Waxaa lagu heli karaa laba nooc oo ah xubin kuwaas oo xubin shaqsi $ 10 bil kasta iyo qorshaha qoyska ee $ 15 bil kasta.
4. Music App-ka sokow ka shaqeeya qalabka Apple, Apple Music doonaan ugu dhaqsaha badan la bilaabay qalabka Android sidoo. Apple ka dhigi doonaa music Apple laga heli karaa sida app ah si ay Android users u soo bixi kartaa ka dibna waxa ay sidoo kale ku raaxaysan on telefoonada iyo kiniiniyada aad. Waxaa la filayaa in xitaa Android users; music app Apple ee xaliyay shaqayn doonaa oo bixi doonaa ku dhawaad ​​sifooyinka isku mid ah in ay bixisaa in dadka isticmaala Apple. Sidaas darteed haddii aad tahay qof an Android, ka dibna ma yeelan doonaan inaad sugto inta badan u cajiib Apple music app in loo isticmaalo.
Meesha laga helo music bixi karo oo lacag la'aan ah?
> Resource > Music > adeeg Music Apple